Mareykanka oo digniin adag u diray Shiinaha | Universal Somali TV
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay difaaci doonaan Jasiirada Taiwan ’hadii ay la kulmaan weerar kaga yimaada Shiinaha, xili mugdi uu sii galayo xiriirka soo jireenka ahaa ee u dhaxeeyay maamulada Washington iyo Bejing.
Haa waa difaaci doonaa ayuu yiri Biden oo ka jawaabayay su,aashan isaga oo u waramayay Tv-ga Mareykanka laga leeyahay ee CNN-ka.
Hogaamiyaha Mareykanka ayaa intaa raaciyay in ay ka go,antahay difaaca madax-banaanida Taiwan oo uu sheegay in cadaadis dhanka siyaasada ah iyo awood milatari ay kala kulmayaan Shiinaha.
Mareykanka ayaa mudo sanado ah si dadban u waday taagero Milatari uu uu siinayo maamulka Taiwan, balse arintaan ayaa la ogeyn in ay sii socon doonto hadii uu weerar ku qaado Shiinaha.
War ka soo baxay aqalka cad ayaa dhanka kale lagu sheegay in isbadal uusan ku imaan siyaasada Washington ee Taiwan.
Xiriirka difaaca Mareykanka uu la leeyahay Taiwan waa xeerka Taiwan u yaala, waana sii xaqiijin doonaa sida ay inooga go,an tahay fulinta xeerkan waana sii wadi doonaa taageerada Taiwan ee ku aadan in dal ahaan ay isku Difaacdo.
Bishii Agoosto ee sanadkaan ayay aheyd markii madaxweyne Biden uu shaaciyay in uu jirin isbadal ku yimid xiriirka dalkiisa kala dhaxeeyo Taiwan waxaana uu xaqiijiyay in ay difaaci Taiwan hadii Shiinaha uu weerar ku soo Qaado.
Bishan aynu ku gudo jirno ayay aheyd markii ay soo shaac baxday warar sheegaya in Mareykanka iyo Shiinaha ay ka heshiiyeen arinta Taiwan oo shiinaha u uu aaminsan yahay mid ka mid ah maamulada hoos Yimaada.
Xukuumada Bejing ayaa dhankeeda sii xoojisay tan iyo kowdii bishan October cadaadiska milatari oo ay ku heyso Taiwan, waxaana ay u dirtay dhowr diyaaradood oo nooca Milatariga iyo aaladaha kale ee difaaca Ciidanka.
Kan-xigaXaalad degdeg ah oo lagu soo rogay da...
Kan-horeHaweeney 90 jir ah oo lagu kufsaday d...
62,796,706 unique visits